Masinina manamafy ny fantsom-panafody ho an'ny fizotran'ny zoro
Home / Applications / Induction Hardening / masinina manamafy induction
Sokajy: Induction Hardening, Induction Hardening Machine Tags: mividy milina manamafy, induction hardening, induction hardening machine, vidin'ny milina fanamafisana, fanamafisam-peo, fanamafisam-bolo ny vovoka, milina fanamafisana hazo, dingana fanamafisana ny hazo, fanamafisana induction hazo, milina fanamafisana indostrialy, rafitra fanamafisana orina, fanafanana induction hazo
Masinina manamafy ny fantsom-panafody matetika
Induction hardening Ampiasaina manokana amin'ny fanamafisana / famonoana ireo velaran-tany misy zana-kazo ary koa ireo faritra miendrika endrika izay faritra iray ihany no mila hafanaina.
Amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny fahita matetika amin'ny rafitra fanamorana ny induction, voafaritra ny halalin'ny fidirana.
Ho fanampin'izay, afaka manapa-kevitra raha hamafisina amin'ny rivotra ilay faritra, miaraka amin'ny rano na miaraka amina emulsion manamafy. Miankina amin'ny antonony mangatsiaka, ny haavon'ny hamafin'ny fahasamihafana.
Fanamafisana ny fantsom-panafody azo tanterahina ho vahaolana amin'ny tanana na mandeha ho azy. Misy ihany koa ny mety hamafisina amin'ny fizotrany mitohy.
Mety amin'ny fanamafisana sy fikolokoloana ireo sanganasa isan-karazany, toy ny fanamafisana ny vatan-kazo, peratra, lalamby fitarihana, kapila, pin, ary faritra hafa
Izy io dia manana ny asan'ny fanamafisana mitohy, ny fanamafisana miaraka, ny fanamafisana mitohy, ary ny fanamafisana miaraka;
Mampiasà rafitra fanaraha-maso isa na PLC ary rafitra fanaraha-maso hafainganam-pandeha haingam-pandeha hahitana ny toeran'ny workpiece sy ny scanning, ary ampifandraiso ny PLC sy ny angovo fampidirana induction mba hahatsapa famokarana mandeha ho azy.
Mitsangana (manamafy ny zana-kazo) + marindrano (manamafy ny faritra misy peratra)
Ny fanamafisana dia iray amin'ny Fanafanana induction HLQ Ireo faritra fampiharana lehibe an'ny rafitra herinaratra. An-jatony ny vahaolana manamafy anay no miasa manerantany — ny maro amin'izy ireo ao anatin'ny indostrian'ny fiara.
Ny tombony lehibe amin'ny fanamafisana induction ho an'ny fanamafisana dia ny segondra vitsy monja. Ao anaty lafaoro iray, ny dingana mitovy amin'izany dia mety maharitra ora maromaro na andro maromaro mihitsy aza. Ahoana no ahatongavan'izany?
Ny valiny dia miavaka ny fampidirana amin'ny famokarana hafanana haingana. Io kosa dia midika fa azonao atao ny mampiditra henjana amin'ny fizotry ny famokarana. Ny fanamafisana ao anaty lafaoro, etsy ankilany, dia mandany fotoana bebe kokoa (fahaverezan'ny hafanana lehibe kokoa) ary mitaky ny famindrana ireo singa ao amin'ny fatana anao manokana na amin'ny an'ny mpifanaraka.
Ny fampidirana an-tsipika fanamafisana dia mampihena ny fotoana fitarihanao.
Mahazo mifehy tanteraka ny kalitao, ny fotoana fandefasana ary ny vidiny ianao. Tsy ilaina ny mitondra fitambaran-kilao kilao miverina sy mandroso, izay mitsitsy angovo sy ny tontolo iainana. Ary farany nefa tsy azo odiantsy, dia namboarinao farafahakeliny ny isan'ny fitantanan-draharaha.
HLQ Induction Heating Power Systems dia manana traikefa efa an-taonany maro amin'ny fanamafisana sy ny fifehezana ireo karazan'asa isan-karazany. Ao afovoan'ny rafitra Hardening tsirairay dia ny HLQ Induction Heating Power Systems Induction Heat Power Source, ny mpanova matetika ny indizena. Ireto mpanova laza ireto dia manampy amin'ny fiantohana ny valim-panamafisana tsara indrindra - isan'andro isan'andro, isan-taona
The induction hardening machine ahitana ny Vertical Scanning, Horizontal (tsy misy afovoany) Scanning sy namboarina milina-sy serial sy / na mifanindran-dàlana loharanom-pahefana fampidinana miaraka amin'ny herin'ny output sy ny hatetika.
Ity fitaovana milina fanamafisana andian-dahatsoratra ity dia mampiasa teknolojia fanaraha-maso isa, manana fijanonana famonoana mitohy, mitohy, mitohy ary mitaky fizarana, ampiasaina indrindra amin'ny famonoana ireo lozam-pifamoivoizana, kapila, tsimatra ary peratra, ary asongadin'ny fametrahana mazava tsara. fitaovana milina manamafy izay ampifandraisina amin'ny alàlan'ny matetika, ny refin'ny Superaudio, ny milina avo lenta ary ny milina fanamafisam-peo fampidirana matetika ultrahigh.
Fitaovana fitaovana famonoana / fanamafisana CNC:
Rafitra CNC: ny rafitra CNC milina famonoana mavesatra be dia be dia afaka manangona sy mitahiry karazana fandaharam-pandrosoana famonoana arakaraka ny fepetra takiana amin'ny workpiece samihafa.
HMI: karazana fandaharana sy fampiasa amin'ny masinin'olombelona aseho amin'ny anglisy sy sinoa.
Fanaraha-maso fanaraha-maso: afaka mifehy ny herin'ny fanafanana hanombohana, hijanonana, hamindroana ny fotoana ary hihena ny fotoana, hafainganam-pandehan'ny fihodinana ary hafainganam-pandehan'ny hetsika.
Lathe: mandray rafitra voalamina miaraka amina asan'ny harafesina tsara.
Fizarana ambony fanitsiana: raiso ny fanitsiana herinaratra, mba hahatsapanao ny clamping amin'ny sanganasa hafa lava.
Rafitra latabatra fiasana: raiso ny visy baolina sy motera servo mba hitondra fiara, jiro mitondra fiara, fametrahana mazava tsara ary fametrahana tsara.
Rafitra fihodinan'ny vatan-kazo lehibe: manangana fatra matetika miovaova mba hahitanao ireo faritra fihodinan'ny hafainganana tsy tapaka.
Ampahany fanaraha-maso herinaratra: ny fitaovan'ny milina dia miaro ny lozisialy, manana fiarovana avo sy azo itokisana.
Tabilao: vita amin'ny takelaka vy matevina, misy varavarankely sy varavarana mihetsiketsika, manakana ny fisidinan'ny rano, mora entina ny ampahany ary manara-maso ny fizotran'ny fanamafisana.
Fitaovana fanamafisam-peo / famonoana mijidina miorina amin'ny CNC
Araka ny fahasamihafan'ny workpiece dia misy karazana mitsangana, karazana mitsivalana,karazana mihidy, karazana namboarina, sns.
1.Standard SK-500/1000/1200/1500 karazan'asa mihetsiketsika ho an'ny shaft, kapila, pin ary fametahana fitaovana
2.SK-2000/2500/3000/4000 Transformer karazana mihetsika, ampiasaina amin'ny hafanana hafanana mihoatra ny 1500mm hazo
3. Karazana mihidy: namboarina ho an'ny zana-by lehibe, Tontolo iainana madio kokoa.
Fitaovana milina fanamafisam-peo 4.Horizontal
SK-500/1000/1200/1500/2000/2500/3000/4000 Ampiasaina amin'ny zoro malama
5. Karazana namboarina
modely SK-500 SK-1000 SK-1200 SK-1500
Ny halavan'ny fanafanana Max （mm） 500 1000 1200 1500
Max savaivony fanafanana （mm） 500 500 600 600
Max halavan'ny holding mm） 600 1100 1300 1600
Max lanja ny workpiece （Kg） 100 100 100 100
Hafainganana fihodinana workpiece （r / min） 0-300 0-300 0-300 0-300
hafainganam-pandehan'ny zavatra miasa （mm / min） 6-3000 6-3000 6-3000 6-3000
Fomba fanadiovana Fangatsiahana Hydrojet Fangatsiahana Hydrojet Fangatsiahana Hydrojet Fangatsiahana Hydrojet
fahan'ny malefaka 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz
Motor fahefana 1.1KW 1.1KW 1.2KW 1.5KW
lanja （Kg） 800 900 1100 1200
modely SK-2000 SK-2500 SK-3000 SK-4000
Ny halavan'ny fanafanana Max （mm） 2000 2500 3000 4000
Max savaivony fanafanana （mm） 600 600 600 600
Max halavan'ny holding mm） 2000 2500 3000 4000
Max lanja ny workpiece （Kg） 800 1000 1200 1500
hafainganam-pandehan'ny fihodinana workpiece （r / min） 0-300 0-300 0-300 0-300
Motor fahefana 2KW 2.2KW 2.5KW 3KW
lanja （Kg） 1200 1300 1400 1500
Fitaovana milina fanamafisam-peo shaft CNC:
Rafitra 1.CNC: ny rafitra CNC masinina manamafy matetika dia afaka manangona sy mitahiry programa fandaharam-pahafahana isan-karazany arakaraka ny fepetra takiana amin'ny workpiece samihafa.
2.HMI: karazana fandaharana sy fampifandraisana ny masinin'olombelona aseho amin'ny anglisy sy sinoa.
3.Control fanitsiana: afaka mifehy ny herin'ny fanafanana hanombohana, hijanonana, hamindroana ny fotoana ary hihena ny fotoana, hafainganam-pandehan'ny fihodinana ary hafainganam-pandehan'ny hetsika.
4.Lathe: mandray rafitra vita amin'ny lasitra miaraka amina asa tsy voaporofo.
5.Top fanitsiana an-tampony: mandray fanitsiana herinaratra, mba hahatsapanao ny fametahana ny sanganasa asa lava.
6. Rafitra latabatra fiasan'ny birao: makà visy baolina sy motera servo handroahana, hazavana mitondra fiara, fitarihana avo lenta ary fametrahana toerana marina.
7.Main system rotation shaft: mandray fatra matetika miovaova mba hahitana ny faritra fihodinan'ny hafainganam-pandeha tsy miovaova.
8.Fizarana fanaraha-maso herinaratra: ny fitaovan'ny milina dia manana fiarovana fiarovana lootra, manana fiarovana avo sy azo itokisana.
9.Frame: vita amin'ny takelaka vy matevina, misy varavarankely sy varavarana mihetsiketsika, misoroka ny rano miparitaka, mora entina ny ampahany sy manara-maso induction hardening dingana.
Fandaharana fihenan-tsasatra avo lenta amin'ny induction
Fitaovam-pamokarana famonoana mihozohozo